Artemisia, baobab… Ireo zavamaniry afrikanina afaka manampy amin'ny ady amin'ny coronavirus - Jeune Afrique - TELES RELAY
Tatitra iray avy amin'ny foibem-pikarohan'i Kew Gardens no miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba hijery ny zava-maniry afrikanina, indrindra ny hiady amin'ny Covid-19. Resadresaka ifanaovana amin'ny iray amin'ireo mpitarika an'ity fandalinana ity, ny profesora Monique Simmonds.
Ahoana raha azontsika atao ny mampiasa tsara kokoa ny harena izay eo imasontsika nefa mbola tsy trandrahana? Ny zavamaniry sy ny holatra dia afaka manitatra ny isan-karazany azontsika atao, mino ny ivon-toeram-pikarohana ao amin'ny Royal Botanic Gardens any Kew, London, ao aminy. tatitra fahefatra, navoaka ny 30 septambra.
Ny sasany amin'ireto karazana ireto, voatanisa ao amin'ny 210 ny manam-pahaizana amin'ny firenena 42, dia azo ampiasaina amin'ny sakafo - zavamaniry fihinana mihoatra ny 7 no voarakitra -, fananganana na fanafody mihitsy aza. Ny fanafody voajanahary dia efa nampiasaina tamin'ny fitsaboana kanseran'ny diabeta, diabeta, zona na tazomoka.
Raha mbola mivoatra erak'izao tontolo izao ny areti-mifindra covid-19, ny foibem-pikarohana dia manolo-kevitra ny haka aingam-panahy avy, ankoatry ny zavatra hafa, ny fanafody nentim-paharazana afrikana, hizaha ny mety ho natiora amin'ny ady amin'ny virus. Ary miantso fiaraha-miasa iraisampirenena momba io lohahevitra io. Nihaona tamin'ny iray amin'ireo tompon'andraikitra tamin'ny tatitra, ny profesora Monique Simmonds.
Young Africa: Amin'ny taona 2019, zavamaniry maherin'ny 1 900 sy holatra 1 no azo nantsoina voalohany tamin'ny siantifika. Nahoana no zava-dehibe ny firesahana azy ireo?
Monique Simmonds: Ny mponina eran-tany dia antenaina hahatratra olona 10 miliara amin'ny 2050. Na izany aza, hipoitra ny bibikely vaovao sy aretina vaovao, izy rehetra dia ao anatin'ny fiovan'ny toetr'andro. Na dia atahorana ho lany tamingana aza ny zavamaniry roa amin'ny dimy dia ilaina ny manao politika hiarovana azy ireo satria tsy isalasalana fa tena ilaintsika tokoa izy ireo manoloana ireo fisehoan-javatra ireo.
Ny fiaraha-miasa amin'ny Millennium Seed Bank dia drafitra fiarovana lehibe indrindra manerantany in situ eto amin'izao tontolo izao. Any Afrika, ity orinasa fitehirizana sy fananganana tahiry nasionaly ity dia afaka manampy amin'ny fahalalana tsara kokoa ny tany, amin'ny famokarana fanafody famonoana bibikely voajanahary, hiadiana amin'ny famongorana ny tany efitra, ary handray anjara amin'ny faharetan'ny toetrandro sy ny fiarovana ara-tsakafo. Ny loharanom-pahalalana nentim-paharazana dia mety hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa.
Ny tatitra nataonao dia manondro fa ny karazana 723 ampiasain'ny fanafody dia atahorana ho lany tamingana. Mifanohitra amin'izany, nahita zava-maniry vaovao any Afrika ve ianao?
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny https://www.jeuneafrique.com/1058109/societe/artemisia-baobab-ces-plantes-africaines-qui-pourrait-aider-a-lutter-contre-le-coronavirus/?utm_source= tanora Africa & utm_ Medium = flux-rss & utm_campaign = flux-rss-young-africa-15-05-2018